किन भइरहेको छ, भक्तपुरका बजारमा सिटामोल अभाव? « AayoMail
किन भइरहेको छ, भक्तपुरका बजारमा सिटामोल अभाव?
2021,26 August, 5:37 pm
भक्तपुर– भक्तपुरका राजेन्द्र श्रेष्ठले आफूलाई ज्वरो आउँंला जस्तो महशुश भएपछि सिटामोल खोजे। तर पाएनन् । नजिकैको औषधि पसलमा नपाएपछि अर्काे पसलमा खोजे तर त्यहाँं पनि पाएनन्। बल्लबल्ल तेश्रो पसलमा पाए। तर त्यहाँं पनि मागे जति दिएनन्। उनले भने, ‘अहिले सिटामोलको अलि अभाव छ, त्यसकारण सवैलाई पुर्‍याउन थोरै मात्र लानुस भनेर दिए।’
अरुबेला सामान्य औषधी पसलहरुमा पनि सजिलै पाइने सिटामोल हिजोआज भने पाउन हम्मेहम्मे भएको गुनासो गर्छन उनी। कहीकतै पाइहालेमा पनि भने जति दिएको अवस्था छैन। सामान्य सिटामोलकै अभाव हुनु दुःखद भएको उपभोक्ता बताउँंछन्।
एक जना औषधी पसले विक्रम मानन्धरका अनुसार सिटामोलको माग वढेर अभाव भएको होइन। अर्थशास्त्रले माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा अभाव हुने गरेको बताउँछन्। उनले भने,‘माग अनुसार आपूर्ति नभएपछि बजारमा सामानको अभाव हुन्छ। सामानको अभाव भएपछि मूल्य बढाउन थाल्छ।’ ती पसलेले सिटामोलको मूल्य भने नबढेको स्पष्ट पारे।
स्वास्थ्य कार्यालय कटुञ्जे भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारले बजारमा सिटामोलको अभाए भए जस्तो मात्रै भएको बताए। सवैतिर अलि सजिलै नपाएको मात्र हो, पाउँदै नपाएको चाहि होइन, उनले आयोमेलसँंग भने, कहीकतै भएन भने चाँहिं हो।
उनका अनुसार माग अनुसार सिटामोल नभए पनि हुँंदै नभएको चाँहिं होइन। खोजेकै पसलमा पाइनेमा अलि अभाव जस्तो भएर अर्काे पसलसम्म पुग्नुपरेको बाध्यता मात्रै भएको उनले बताए।
ख्वप अस्पताल च्याम्हासिंह भक्तपुरका प्रमुख डा रत्नसुन्दर लासिवाले बजारमा हल्ला भए जति अभाव नभएको बताउँंछन्। उनी भन्छन्, ‘मैले बुझे अनुसार खासै अभाव छैन। हाम्रो ख्वप अस्पतालमा चाहि अभाव नभएको उनको बुझाई छ। बजारमा सिटामोल अभाव सामान्य देखिए पनि के कारणले अभाव भएको हो भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन्।